Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Crime » Ogbugbu dị egwu na Tanzania: onye oji egbe anwụọla
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Crime • News • Safety • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Onye na -agba egbe na Tanzania
Ndị uwe ojii Tanzania gbagburu otu nwoke ji egbe nke chere na ọ bụ onye Somalia ka ya na ndị uwe ojii Dar es Salaam na-agba mgbọ mgbe nwoke ahụ gbagburu ndị uwe ojii abụọ na ihe egwu dị egwu taa.
Ụlọ ọrụ nnọchi anya United States na Tanzania nyere ịdọ aka na ntị maka ụmụ amaala America nọ na mba ahụ n'ihi ogbunigwe na Dar es Salaam.
Agbapụ agbapụ mere na nso ụlọ ọrụ nnọchite anya mba France nke bụkwa ebe ndị Japan, Kenya, na ndị nnọchite anya mba Russia nakwa ụlọ ọrụ na -ahụ maka ego.
Amabeghị ihe onye na -agba ụta maka mwakpo a.
Ụlọ ọrụ nnọchite anya United States na Tanzania enyela ịdọ aka na ntị nye ụmụ amaala America ka ha mụrụ anya mgbe ha na -anya ụgbọ ala n'akụkụ dị iche iche nke isi obodo azụmahịa Tanzania. Ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ US gbara ụmụ amaala ya ume ka ha "zere mpaghara ahụ ma nyochaa mgbasa ozi mpaghara maka ozi."
Onye mwakpo a na -amaghị onye nọ na -agba egbe na isi obodo azụmahịa Tanzania nke Dar es Salaam, gbagburu ndị uwe ojii 2 n'okporo ụzọ kacha ekwo ekwo na nso ụlọ ọrụ nnọchi anya US na Tanzania.
Mgba egbe a mere n'okporo ụzọ Ali Hassan Mwinyi nke dị nso na àkwà mmiri Selander n'ehihie, oge ọwụwa anyanwụ Afrịka.
Ndị ọkwọ ụgbọala nọ n'ụjọ na ndị njem hapụrụ ụgbọ ala ha gbalaga maka ndụ ha, ndị nta akụkọ nọ ebe ahụ kwuru.
Ndị uwe ojii gbara nwoke ahụ gburugburu wee gbuo ya n'akụkụ ụlọ ọrụ nnọchi anya France nke dị na mpaghara ahụ.
Mpaghara a bụkwa ebe obibi nke ndị bi na ọfịs nke ndị nnọchi anya mba ofesi gụnyere ndị nnọchi anya Japan, Kenya na Russia, ọ dịkwa nso na ụlọ ọrụ ego gụnyere Kenya KCB Bank na Stanbic Bank South Africa.
Ndị uwe ojii na ndị ọrụ nchekwa na Tanzania ka ga-ekpughe ihe kpatara mwakpo a n'etiti ehihie.
A manyere ndị na -eme njem n'okporo ụzọ Oysterbay na Upanga dị jụụ ka ha hapụ ụgbọ ala ha ka ha na -agba ọsọ maka ndụ ha.
Vidio e tinyere na soshal midia gosiri ọrụ ndị uwe ojii jikọrọ aka wee wakpo onye mwakpo ahụ tupu agbagbuo ya n'etiti okporo ụzọ na -abụghị ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ Embassy France.
Ndị ji anya ha hụ ihe mere kwuru na onye ahụ na -awakpo nwere ike gbuo ụfọdụ ndị nkịtị mgbe a na -agba égbè.
Ntuziaka nchekwa gọọmentị sitere na ụlọ ọrụ nnọchi anya US na -agụ, sị:
Alert nchekwa - ụlọ ọrụ nnọchi anya US Dar es Salaam, Ọgọst 25, 2021
Location: Mpaghara dị nso na ụlọ ọrụ nnọchi anya French na Ali Hassan Mwinyi Road, Dar es Salaam, Tanzania
omume: Nzute ndị agha dị nso na ụlọ ọrụ nnọchi anya France.
Enwere akụkọ maka ọgụ ọgụ na -aga n'ihu n'akụkụ ụlọ ọrụ nnọchi anya France na Ali Hassan Mwinyi Road.
Ihe ị ga -eme:
A dụrụ ụmụ amaala US na ndị ọrụ gọọmentị US ọdụ ka ha zere mpaghara ahụ.
A malitere njem nlegharị anya mpaghara mpaghara ọwụwa anyanwụ Afrịka